होम आइसोलेसनमै अक्सिजनको मात्रा घट्न थाले कोभिडका बिरामीले के गर्ने ? | eAdarsha.com
पोखरा । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तिब्र रुपमा फैलिरहँदा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या बढिरहँदा अस्पतालहरुसमेत भरिभराउ भएका छन्। कतिपय अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ भने अक्सिजन भएका स्थानमा पनि सिलिण्डरको अभाव देखिएको छ।
यसैबीच डा अनूप सुवेदीले घरमा बस्दाबस्दै अक्सिजनको मात्रा घट्न थाले कोभिडका बिरामीले के गर्नैपर्छ ? भर्ना गरेर अक्सिजन, अन्य उपचार लिन नपाउँदा के गर्ने भन्ने उपाय सुझाएका छन्।
यस्तो छ डा सुवेदीको सुझाव :
घरमा बस्दाबस्दै अक्सिजनको मात्रा घट्न थाले कोभिडका बिरामीले के गर्नैपर्छ ?
उत्तरः स्टेरोइड औषधी खान सुरु गरिहाल्ने। यो कोभिडको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, प्राणदायी औषधी हो।
याद रहोस्, अक्सिजन नघटी यो सुरु गरे हानी हुनसक्छ, तर अक्सिजन घट्न थाल्ने बित्तिकै यो औषधी सुरु गर्दा प्राण जोगाउन मद्दत गर्ने देखिएको छ।
अक्सिमिटरले अक्सिजनको लेबल ९२ वा कम देखायो (मेसिन औंलामा कम्तीमा ३० देखि ६० सेकेन्ड राखेपछि) भने अक्सिजन कम भएको मानिन्छ।
मधुमेहका औषधीको डोज बढाउने वा केही दिनलाई इन्सुलिन लिनुपर्ने हुन सक्छ।